FAAYIDAA AFOOLA OROMOO - Afoolaa Afaan Oromoo Beekan Gulummaatiin
Beekan Gulummaa Irranaa – Hayyuu Oromoo
3. Miliquuf: Dhalli namaa bu’aa bayii jireenya isaa keessatti kan isa mudatu jalaa miliquu barbaada. Bu’aa bayii jireenyaa kana jalaa miliquuf afoolatti fayyadama. Jireenya nuffisiisaa kolfaan dabarsa. Addunyaa haaraa keessa seenee gammachuu waliin qooddatee jiraachuu fedha.
4. Barsiisuu: Gosoon afoolaa hedduun keessumattuu kanneen akka sheekkoo, mammaaksa, hibbboo, geerarsa, walaloo, sirboota adda addaa kkf. Amala gaariifi tooftaalee jireenyaa barsiisuuf nifayyadu. Seera nyaataa, dhugaatii, uffannaa, taa’umsaa, haasaa, kkf. adeemsa dhala namaa barsiisuuf fayyadandha. Jiruufi jireenya hawaasaa keessatti bu’aalee arjummaan, tattaafannaan, tokkummaan, kkf. qaban nuhubachiisu. Amala iloolleefi dargaggoonni horachuu qabanu daa’imummaatii eegalanii sirreessuuf nigargaaru.
5. To’achuuf: Gosooti afoolaa mala ykn tooftaa jireenyaatiifi amala gaarii barsiisanu, amaloonni hawaasa biratti jibbamanu akka hin babal’annes to’achuu nidanda’u. Hattuummaan, sobuun, doqnummaan, garaa-jabummaan, kkf amala gadhee ta’uu ibsu: Akka miseensonni hawaasaa irraa of-eeggatanu akeekkachiisu; nito’atu. Raawwilee hawaasa biratti fudhatama qabanuufi jibamanu adda baafachuun akka qajeelfamaatti akka itti fayyadamanu nitaasisu.
Hayyee, beektota keenya nuuf jiraadhaa. Anis sinittan boona.
jechan ittiin si galateeffadhu hin qabu!!. Ati dhugumatti goota ajaa’ibsiifamaa seenaa fi aadaa oromootiif dadhabaa jiruudha.umurii dheeradu!!
AFOOLLI OROMOOF QABEENYA GUDDAADHA.
QABEEENYA QABEENYA EEGUDHA. AADAA FI SEENAAN KEEENYA KAN JIRATTI BADUU IRRAA HAFEEF AFOOLAANI. AMMAYYUU BAAYYEETU HAFA.
Beekan Gulummaa Irranaa nuuf jiraadhu.Ogbarruu oromootiif waan baay’ee nama godhe keessaa isa tokkodha ati.kanaaf sitti boonna.Haa ta’u malee haayyota oromoo qeequun kee fi qabsoo oromoo duubatti akka deebi’uf beekamtii dhuunfaa kee argachuuf hawwuun kee baay’ee na gaddisiiseera.Ana qofaa miti lammii hedduun sitti gaddeera.yoon balleesse dhiifama!!hayyoonni keenya wal hin tuffatiinaa!irree waliif ta’aa